I-Luxury House emangalisayo yabahambi!
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Walker
Ikhaya elihle lokunethezeka elibanzi endaweni enhle! Uzojabulela leli khaya leholide lezinkanyezi ezi-5 elifakwe ngokugcwele elihlanganisa izindawo zokuhlala, indawo yomlilo, i-smart tv kuwo wonke amagumbi anekhebula, i-WiFi, ikhishi eligcwele, ishawa nokunye okuningi. Sitholakala kalula eduze ne-Chehaw Park kanye nenkundla yegalofu emangalisayo yase-Riverfront. Lena indawo ekahle yokuhlala uma ufuna okungenani ubusuku obu-4 noma ngaphezulu ukubaleka, uvakashele umndeni/ abangani, noma usohambweni lwebhizinisi.
Lena iyunithi engabhemi. Azikho izilwane ezifuywayo noma amaqembu avunyelwe. Ukwakheka kwezwe kuyamangalisa! Jabulela izinyoni ezicula njalo ekuseni njengoba ujabulela ikhofi lakho kuvulandi ongemuva. Ukuthula yikho okulindile!
4.95(37 okushiwo abanye)
Ngaphansi kwamamayela angu-5-10:
-Isibhedlela sasePhoebe Putney
-Downtown Albany/Civic Centre/Aquarium
- I-Albany State University
Siyatholakala ukuze siphendule imibuzo nge-imeyili. Ukuhlala kwanyanga zonke izinsuku ezingu-20 - izinsuku ezingu-28 zingathola inani elingase libe ngu-5% wesaphulelo semali yokubhuka. Akukho ukuxoxisana.
UWalker Ungumbungazi ovelele